नेपालमा आज मात्रै २१ जनाको ज्यान गयो, कुन जिल्लामा कति ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालमा आज मात्रै २१ जनाको ज्यान गयो, कुन जिल्लामा कति ?
नेपालमा आज मात्रै २१ जनाको ज्यान गयो, कुन जिल्लामा कति ?
काठमाडाैं । मनसुन थप सक्रिय भएसँगै बाढी पहिरोले धनजनको क्षति हुने क्रम बढेको छ । आज मात्रै विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोमा परी १९ जनाको ज्यान गएको छ । १३ जना बेपत्ता भएका छन् । १० जना घाइते भएका छन् ।लगातार परेको पानीका कारण म्याग्दीमा बाढी र पहिरोमा पुरिएर १० जनाको ज्यान गएको छ । अरु १२ जना बेपत्ता भएका छन् । बाढी तथा पहिरोमा परेर मालिका गाउँपालिका–७, विममा ८ जना र धवलागिरी–७, ताकममा दुई जनाको ज्यान गएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले जानकारी दिए ।
यसैगरी धवलागिरी–६, मराङमा बाढी तथा पहिरोमा परेर १२ जना बेपत्ता भएका प्रजिअ ढकालले बताए । उनले दिएको जानकारी अनुसार मराङमा २० घरधुरी, विममा १० घरधुरी र ताकममा ५ घरधुरीमा क्षति भएको छ । बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाएकाको परिचय खुल्न बाँकी रहेको उहाँले बताए ।
रघुगंगा नदीमा आएको बाढीले बेलिब्रिज बगाए पनि मानवीय क्षति भने नभएको रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । नदीमा उच्च बहाव आएको र बेलिब्रिजमा क्षति पु¥याउने अवस्था देखेपछि गलेश्वरवासीले मध्यराति नै खबर गरेपछि नदीको आसपासमा रहेका बस्तीबाट मानिसहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको उनले बताए ।
कास्कीमा ६ जनाको ज्या,न गयो-पहिरोले घर पुरिंदा कास्कीको पोखरा र हेम्जामा ६ जनाको ज्यान गएको छ । पोखरा महानगरपालिका १८ गोठादीमा पहिरोमा परि ५ जनाको ज्यान गएको छ । ८ जना घाइते भएका छन् । टंकबहादुर थापाको घर पहिरोले पुरिंदा ५ जनाको ज्यान गएको कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी सुबास हमालले जानकारी दिए ।
ज्यान गुमाउनेको परिचय खुलेको छैन । पहिरोले पुरिएको घरमा हिजो जन्मदिन मनाउन आफन्तहरु पनि आएका स्थानीयले बताएका छन् । घर पूर्ण रुपमा पहिरोले पुरेको छ । घाइतेलाई पोखराको मणिपाल अस्पताल र पश्चिमाञ्चल अस्पताल लगिएको छ ।
यस्तै कास्कीको हेम्जामा रहेको रामचन्द्र अधिकारीको घर पहिरोले पुरिँदा उहाँकी आमा हिमकलीको ज्यान गएको कास्कीका डिएसपी सुबास हमालले जानकारी दिए । यस्तै पोखरा–२६ पैतेडाँडाका स्थानीय दुर्गाबहादुर सुनारको घर भत्किँदा घरधनी सुनार बेपत्ता भएको प्रवक्ता हमालले बताए ।
लमजुङको सातबिसेमा पहिरोले एकै घरका तीन जनाको ज्यान गयो लमजुङको बेसीसहर नगरपालिका ७ सातबिसेमा पहिरोले घर पुरिंदा तीन जनाको ज्या,न गएको छ ।
दीपक तामाङको घर पुरिंदा एकै घरका तीन जनाको ज्यान गएको हो । ज्यान गुमाउनेमा दीपक तामाङ, उहाँकी श्रीमती बिमाया तामाङ र छोरा सेवाङ तामाङ रहेका लमजुङका प्रहरी नायब उपरीक्षक गङ्गाबहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ । पहिरो खस्दै गर्दा भागेका सन्तबहादुर गुरुङ, अनिल गुरुङ र सुमन गुरुङ घाइते भएका पनि उनले बताए ।
रुकुम पश्चिममा पहिरो खस्दा एकै घरका दुई जनाको ज्या,न गयो
रुकुम पश्चिममा पहिरो खस्दा एकै घरका दुई जनाको ज्यान गएको छ । आठबिसकोट नगरपालिका–३ का २८ वर्षीया सीता दमाई र उहाँका ६ वर्षीय छोरा हाविलको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । ८ वर्षीया छोरी हिरालाई उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका कार्यालय प्रमुख डीएसपी ठगबहादुर केसीले बताए । आठबिसकोट नगरपालिका–३ मा रहेको रेझेखोलामा आएको पहिरोले तुलबहादुर दमाईको घर पुरेको थियो । पहिरो खस्दा तुलबहादुर घरमा नरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
हिजो सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकामा बाढी र पहिरोमा बेपत्ताहरुको आज बिहानदेखि खोजी थालिएको छ । हराइरहेका २१ जनाको खोजीको काम सुरु भएको हो । आज स्काभेटर समेत प्रयोग गरेर खोजी भैरहेको तर पानी परेकाले समस्या भैरहेको सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए ।
हिजो बाह्रबिसे नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरोमा परेर दुई जनाको ज्यान गएको छ । घाइते ६ जनाको काठमाण्डौमा उपचार भैरहेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार बाढी र पहिरोमा १६ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् ।
​कास्की, नवलपरासी, म्याग्दी र लमजुङका केही ठाउँमा बाढी खतराको संकेतमा पुगेको छ । पोखरा, वलपरासीको बर्दघाट तथा लम्जुङका बेसिशहर र खुदीबजार क्षेत्र, म्याग्दीको दर्वाङमा नदीको बाढी खतराको संकेतसम्म पुगेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । ती ठाउँमा ठूलो वर्षा भएकाले बाढी खतराको संकेतसम्म पुगेको हो । सप्तकोशीमा पनि पानीको बहाव बढेको छ ।
गण्डकी प्रदेशसँगै प्रदेश १, प्रदेश २ र ५ का केही ठाउँमा पनि भारी वर्षा भएको छ । भारी वर्षा भएका ठाउँका नदीहरुमा बाढी आउने भएकाले सचेत हुन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । सोमबारसम्मै पानी ठूलो पर्ने भएकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन् ।